စပိန်မှာ မြောက်ပိုင်းမီးတွေ ဘယ်တုန်းကရှိသလဲ၊ လျှို့ဝှက်ချက်များ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 20/06/2022 10:00 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
မြောက်ဘက်အလင်းများသည် မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်း၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ နော်ဝေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် မြောက်ဘက်အလင်းရောင်ဟာ တစ်နှစ်ရဲ့အချို့အချိန်တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စပိန်မှာ မြောက်ပိုင်းမီးတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ စပိန်မှာ မြောက်ပိုင်းမီးတွေရှိတုန်းကနဲ့ အဲဒီအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကို ပြောပြပါမယ်။
1 Aurora borealis က ဘယ်လိုပုံစံလဲ။
2 စပိန်မှာ ဘယ်တုန်းက Aurora borealis ရှိသလဲ။
3 ပြည်တွင်းစစ် မြောက်ပိုင်းအလင်း
4 စပိန်မှာ မြောက်ပိုင်းမီးတွေရှိတုန်းက သက်သေတွေ
5 ဥရောပရှိ အခြားနေရာများတွင် မြောက်ဘက်မီးများ
Aurora borealis က ဘယ်လိုပုံစံလဲ။
မြောက်ပိုင်းအလင်းကိုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်မြင်နိုင်သောချောင်းအလင်းရောင်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ကောင်းကင်သည်အရောင်ဆိုး။ ၎င်းသည်လုံးဝမှော်ဆန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မှော်အတတ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်နေအဖွဲ့အစည်း၏လှုပ်ရှားမှု၊ ကမ္ဘာမြေဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ထိုအချိန်ကလေထုအတွင်းရှိစရိုက်လက္ခဏာများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်သည်။
မြင်နိုင်သောကမ္ဘာ၏ ဧရိယာများသည် ကမ္ဘာ၏ဝင်ရိုးစွန်းများထက်တွင်ရှိသည်။ နေမှထွက်လာသော အက်တမ်အမှုန်အမွှားများကို ဗုံးကြဲခြင်းကြောင့် မြောက်ပိုင်းအလင်းများသည် နေရောင်ခြည်မှ ထွက်လာသော မုန်တိုင်းများဟု သိကြသော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထွက်လာတဲ့ အမှုန်တွေဟာ ခရမ်းရောင်ကနေ အနီရောင်အထိ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်ပအာကာသသို့ ရွေ့လျားလာသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ သံလိုက်စက်ကွင်းထဲသို့ ပြေးဝင်ကာ ပျံ့လွင့်သွားကြသည်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာရဲ့ ဝင်ရိုးစွန်းတွေမှာသာ မြင်နိုင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။
၎င်းတို့ထဲမှ အီလက်ထရွန်များ ပေါင်းစပ်နေရောင်ခြည်မှ ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်ရောင်ခြည်များသည် သံလိုက်ကို ထိတွေ့သောအခါတွင် ရောင်စဉ်တန်းများ ထုတ်လွှတ်သည်။ Magnetosphere တွင် ဓာတ်ငွေ့ မော်လီကျူးများ အများအပြား ရှိနေကြပြီး ၎င်းသည် အသက်ကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ဤလေထုလွှာ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်သည် ကောင်းကင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသော ဖြာထွက်မှုဖြစ်စေသော အက်တမ်များကို လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည်။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းသွားသည်အထိ ဖြာထွက်ဖြာထွက်သည်။
နေရောင်ခြည် မုန်တိုင်းများကို လုံးလုံးနားမလည်သောကြောင့် မြောက်ပိုင်းအလင်းများ မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကို ကောင်းစွာမသိရပေ။ ၁၁ နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ခန့်မှန်းခြေ ကာလဖြစ်သည်။ Aurora borealis ကို မည်သည့်အချိန်တွင် မြင်နိုင်မည်ဟု အတိအကျ မသိရပေ။ ဝါးလုံးတွေကို ခရီးသွားတာက ဈေးကြီးပြီး အဲဒီအပေါ်က ရင်ခုန်တာကို မမြင်ရရင် ပိုတောင်ဆိုးလို့ သူတို့ကို တွေ့တဲ့အခါ ဒါက ကြီးမားတဲ့ အတားအဆီးတစ်ခုပါ။
လွန်ခဲ့သော 25 နှစ်ကျော် 1938 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 75 ရက်နေ့တွင် ဥရောပတစ်ခွင်မှ မြင်တွေ့နိုင်သော Aurora Borealis တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းစစ်အလယ်တွင် စပိန်နိုင်ငံသည် အံ့အားသင့်မှု၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကြား အဖြစ်အပျက်များကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အဆက်မပြတ်လေ မှုန်သော နေမှ လွင့်စင်ကာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းကို လှည့်ပတ်ကာ နေအဖွဲ့အစည်း၏ အစွန်အဖျားအထိ ပျံ့နှံ့သွားသည်။. အဖြစ်အပျက်အတွင်း၊ ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ကော်နယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပေါက်ကွဲသံများသည် နေပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဤနေရောင်ခြည်မှသယ်ဆောင်လာသော ပစ္စည်းပမာဏကို များစွာတိုးစေသည်။ ဤအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့ရောက်ရှိပြီး ကမ္ဘာမြေ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းမျဉ်းများအတိုင်း ဝင်ရိုးစွန်းများမှတစ်ဆင့် လေထုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် အားသွင်းအမှုန်များ (အီလက်ထရွန်နှင့် ပရိုတွန်များ) ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုအတွင်း ဖြတ်သန်းသွားလာသည့်အခါ နေမှအမှုန်အမွှားများသည် လေထုအတွင်းရှိ အက်တမ်များနှင့် မော်လီကျူးများနှင့် တိုက်မိကာ ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်အချို့ကို ရူပဗေဒတွင် "စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အီလက်ထရွန်းနစ်အခြေအနေများ" ဟုသိကြသည့်အရာများသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ စနစ်အားလုံးသည် စွမ်းအင်အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်သွားတတ်သောကြောင့်၊ လေထုအတွင်းရှိ အက်တမ်များနှင့် မော်လီကျူးများသည် ရောင်စုံအလင်းထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်သည် အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်နှင့် အနီရောင်အလင်းတို့ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး နိုက်ထရိုဂျင်သည် အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို ထုတ်လွှတ်သည်။
ဤအလင်းရောင်သည် ညကောင်းကင်ယံ၏ အလှဆုံး သဘာဝ အံ့ဖွယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် မြောက်ပိုင်းအလင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းသည့် ယန္တရားကြောင့် Aurora များသည် ကမ္ဘာ၏ဝင်ရိုးစွန်းများအနီးရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့်၊ လတ္တီတွဒ် ၆၅ မှ ၇၅ ဒီဂရီကြားတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အဝိုင်းပုံစံ၊ Aurora ဒေသများဟုခေါ်သည်“ Greenland၊ Lapland၊ Alaska၊ Antarctica တို့သည် Aurora အဖြစ်များသောနေရာများဖြစ်သည်။ မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင် Aurora များကို "မြောက်ပိုင်း" နှင့် "တောင်ဘက်" ဟုခေါ်သည်။
အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ပြင်းထန်စွာ ထွက်ထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ပြင်းထန်သော လှုပ်ရှားမှု ကာလကို နေမှ တွေ့ကြုံရသောအခါတွင် Auroral rings များသည် အီကွေတာနှင့် နီးကပ်သော လတ္တီတွဒ်များသို့ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ လတ္တီတွဒ် နည်းပါးသော Aurora များသည် ရှားပါးသော်လည်း ကောင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကိစ္စများစွာ ရှိပါသည်။ လှပသော Aurora ကို 1859 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Hawaii နှင့် Singapore မှ 1909 တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပါသည်။ မကြာသေးမီက၊ 20 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2003 ရက်နေ့တွင် မြောက်အလင်းတန်းများကို ဥရောပနိုင်ငံအများအပြားတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်လည်း Aurora သည် အလွန်ရှားပါးပြီး ရာစုနှစ်တိုင်းတွင် အနည်းငယ်သာ မြင်တွေ့နိုင်သည်။
25 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 1938 ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း ကျွန်းဆွယ်တစ်လျှောက်တွင် မြောက်ပိုင်းအလင်းရောင်များကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ လေထုအောက်ပိုင်းရှိ ဟီလီယမ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကြောင့် အဓိကဖြစ်သော နီမြန်းသောအလင်းရောင်သည် 20 ရက်နေ့ ည 00:03 မှ 00:26 နာရီအတွင်း အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
စပိန်မှာ မြောက်ပိုင်းမီးတွေရှိတုန်းက သက်သေတွေ
သက်သေတွေ အများကြီးရှိတယ်။ Paco Bellido သည် ၎င်း၏ဘလော့ဂ် « El beso de la Luna » တွင် ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ဖော်ပြပြီး José Luis Alcofar ၏ ဖော်ပြချက်ကို သူ၏ စာအုပ် « La aviation legionario en la Guerra Española » တွင် မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ Alcofar ၏ အဆိုအရ ပြင်းထန်သော ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် ဘာစီလိုနာတွင် အဆိုပါ ပုံမှန်မဟုတ်သော မီးလုံးများ၏ အသွင်အပြင်သည် တပ်ဖွဲ့များ၏ စိတ်ဓာတ်ကို များစွာထိခိုက်စေခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ Juan José Amores Liza သည် Alicante တွင် စုဆောင်းထားသော သက်သေခံချက်များစွာကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ABC သတင်းစာက 26 ရက်နေ့ က မက်ဒရစ်မှာ မီးလောင်မှုလို့ ထင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ နေထွက်ချိန်ကို မြို့၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင် မြင်နိုင်သောကြောင့် Pardo တောင်များ လောင်ကျွမ်းနေသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ သို့သော် မကြာမီမှာပင် ၎င်းသည် အမြင့်နှင့် အလင်း၏ ကြီးမားသော တိုးချဲ့မှုကြောင့် မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ထိုအချိန်က Ebro Observatory ၏ ဒါရိုက်တာ ဖခင် Luis Rhodes သည် 27 ရက်နေ့တွင် Herald သတင်းစာတွင် ရှင်းလင်းချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Aurora သည် "ကောင်းကင်ဆီသို့ ပွင့်လာသော အလင်းရောင်ကြီးမားသော ပန်ကာတစ်ခု... အစွမ်းထက် ရောင်ပြန်ဟပ်သည် ကောင်းကင်ဘုံကို အာရုံစိုက်နေသည်…”
ဥရောပရှိ အခြားနေရာများတွင် မြောက်ဘက်မီးများ
ဥရောပရှိ အခြားနေရာများစွာတွင်၊ ပဲရစ်မှ ဗီယင်နာ၊ စကော့တလန်မှ စစ္စလီအထိ၊ ရင်ခုန်သံပုံသဏ္ဍာန်သည် ပုံတိုပတ်စများစွာကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ နေရာတော်တော်များများမှာ မီးသတ်သမားတွေက မီးလောင်တယ်လို့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ မီးလောင်နေတဲ့ သင်္ဘောလို့ ယူဆရတဲ့ ဘာမြူဒါမှာလည်း ဒီဖြစ်စဉ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေရောင်ခြည် မုန်တိုင်းများသည် လှိုင်းတိုရေဒီယို ဆက်သွယ်မှုများကို ပိတ်ထားခဲ့သည်။
အချို့သော ကက်သလစ် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ 1938 ၏အရုဏ်ဦးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီး Fatima ၏ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။. ဒုတိယ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွင်၊ ၁၉၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အပျိုစင်ထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု ကလေးများက ပြောကြပြီး၊ “အမည်မသိသော အလင်းရောင်ဖြင့် လင်းထိန်နေသော ညတစ်ညကို သင်မြင်ရသောအခါတွင် သင်၏ ကြီးမြတ်သော နိမိတ်လက္ခဏာမှာ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်ပါ။ စစ်ပွဲတွေ၊ အစာခေါင်းပါးမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို အပြစ်ပေးမယ့် ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်… ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြေညာတဲ့ ဩရိုရာထဲမှာ လူတချို့က ကြီးကျယ်တဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီနေရောင်ခြည်မုန်တိုင်းကို တစ်ခါတစ်ရံ “ဖာတီမမုန်တိုင်း” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အယူသီးသောဘာသာတရား၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ကျော်လွန်ပြီး၊ ၁၉၃၈ ခုနှစ်၏ အရုဏ်ဦးသည် စပိန်ပြည်တွင်းစစ်၏ အထူးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။. ကောင်းကင်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်၊ တစ်ချို့က စွဲလန်းသွားအောင်၊ အချို့က ကြောက်လန့်ကြပြီး ကောင်းကင်ကိုတောင် စစ်ရဲ့ရက်စက်မှုကြောင့် ဒေါသထွက်နေကြတယ်လို့ လူအများက ယုံကြည်ကြတဲ့ ခဏတာ အပိုင်းတစ်ခုပါ။
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ စပိန်မှာ မြောက်ပိုင်းမီးတွေရှိတုန်းကအကြောင်း ပိုလေ့လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » စပိန်မှာ ဘယ်တုန်းက Aurora borealis ရှိသလဲ။